စပ်ဆလူးခါနေတာ – Grab Love Story
ကျွန်နော်ရဲ့တကယ်အဖြစ်ပျက်လေးပါ။မှတ်မိသလောက်နဲ့ ရေးတက်သလောက်ရေးတာမို့ အဆင်မပြေရင် ဆောရီး ကျနော်အိမ်ထောင်ကျတော့ ဆယ့်ရှစ်နှစ်အရွယ်လောက်ပဲရှိဦးမယ်၊မိန်းမနဲ့လဲအသက်အတူတူ….. ကျန်နော်လူပျိုဘဝတုံးကရည်းစား သုံးလေးယောက်လောက်ရှိတော့၊အားလုံးကိုလည်း လှည်ပတ်ကြိတ်ပါတယ်။ အဲဒီအထဲကပုပုသေးသေးနဲ့ဖင်ကောက်ပြီးအိုးကြီးတဲ့.စော်လေးကိုအကြိတ်လွန်ပြီးကုန်းထောက် ဗိုက်ကြီး လို့ယူလိုက်ရတယ်။
အလကားစားနေရတဲ့ဂွင် အတော်အများပိတ်သွားပြီပေါ့။မွေးရာပါလီးအသင့်တင့်ကြီးပြီး…အကိုတယောက်ထည့်ပေးတဲ့ဂေါ်လီကြောင့် မိန်းမရည်းစားဘဝထည်းက အမြဲမုတ်ပေးပါတယ်။…… မိန်းမဗိုက်ခြောက်လလောက်မှာ မိန်းမရဲ့သဘောအတိုင်း ယောက္ခမ တိုင်းပြည်စရောက်ခဲ့တယ်လေ။ စရောက်ကတည်းကအဆင်မပြေပါဘူး.သိတဲ့အတိုင်းပဲယောက္ခမနဲ့သမက်က..အပြစ်မရှိအပြစ်ရှာခံရတာဓလေ့ထုံးစံလိုဖြစ်နေပါပြီ။
ကျနော်ကလဲမျက်နှာချင်းမဆိုင်မိအောင်နေခဲ့ပါတယ်တနေ့ယောက္ခမကြီးရေလျှားနဲ့ရေချိုးနေတာကိုအမှတ်မထင်ကြည့်မိလိုက်တော့၊အတော်ကိတ်တဲ့နို့ နှစ်လုံးနဲ့ကားပြီးထင်းနေတဲ့ရေစိုထမီအောက်ကဖင်ကြီးကိုသတိထားမိသွားတယ်။ ကို့အကြိုက်နဲ့တစ်ထပ်ထည်းပါလားလို့ စိတ်ထဲမှာရေရွတ်မိတယ်ဗျာ။ယောက်က္ခမကြီးရေချိုးတဲ့အချိန်တိုင်း ချောင်းနေမိတော့တာပေါ့။ ကိူ့မိန်းမထက်တောင်အများကြီးကိတ်နေသေးတော့ စိတ်ကပစ်မှားပြီး ယောက္ခမ ကိုစပြီးစိတ်ဝင်စားလာတယ်။
လုံးဝမဖစ်သင့်တဲ့အရာပါ ယောက္ခမ ကြီးကသားသမီးနှစ်ယောက်…. မိန်းမကအကြီး..အသက်က၄၀လောက်၊ ဘော်ဒီကနည်းနည်းဝပေမယ့် တင်.ရင်.ခါးကသူနေရာနဲ့သူမိုက်နေတုံးပဲ၊သတိထားပြီးလိုက်လိုက်ကြည့်မိလေလေ.. ယောက္ခမ အပေါမကြည်တာတွေမရှိတော့ပဲ.သူယောကျာင်္းကြီးကိုအတော်ကိုမနာလိုဖြစ်မိတယ်။ ………… ယောက္ခမ ရဲ့နို့အုံကြီးတင်ပဆုံကြီးကိုမြင်တိုင်းဂွင်းတိုက်လိုက်အားမရရင်ဗိုက်ကြီးနဲ့မိန်းမကိုပဲလိုးနေရတာပေါ့။
ယောက္ခမလင်မယားလိုးနေတာမြင်ရဖို့ခက်ခက်ခဲခဲကြိုးစားရပါတယ်.အိမ် ကငှါးနေတာဆိုတော့အဖစ်ဆောက်ထားလို့ကံကောင်း……. ယောက္ခမ လင်မယားအိပ်တဲ့အခန်းကို ကိုးရက် ဆယ်ရက်လောက်ကြာတယ်၊ပြန်လာတဲ့အချိန်တိုင်းအိပ်ရေးပျက်ခံပြီးချောင်းရတာမြင်ကွင်းကောင်းတဲ့နေရာတိုင်းအပေါက်ချဲ့ထားတယ်။ သူ့ယောကျားင်္က ကားကြီးမောင်းသမား၊ ယောက်က္ခထီးကလဲကားသမားပီပီ စော်အသေးလေးတွေနဲ့ပွေးနေတော့ သူ့မိန်းမကြီးကိုပစ်ထားတယ်ထင်တယ်။
ချောင်းတိုင်းတခါမှမတွေ့ရဘူးလေ…..ကံကောင်းချင်တဲ့တညမှာ ၁နာရီကျော်လောက်တရေးနိုး အိမ်သာထတက်ရင်း.အသံကြားလိုက်တယ်။ “တအားအား”နဲ့ညည်းသံ၊ ကျနော်အီးပါချင်စိတ်ပျောက်သွားပြီးအပြေး အခန်းရှိရာကြမ်းပေါက်ကပင့်ကြည့်လိုက်တော့……. လီးကိုအငန်းမရစုတ်နေတဲ့ယောက္ခမကြီး.လဥတွေပါရှာနဲ့လိုက်ရက်ရင်း”တအင်းအင်း”အော်နေတယ်၊သူုယောကျာင်္းကတော့ ဝတ်လစ်စလစ်နဲ့အတော်စိတ်ထန်နေပုံပေါက်တယ်။
လီးစုတ်ပေးနေတဲ့ယောက္ခမကြီးကလဲ စုတ်ရင်းနဲ့အတော်ကိုထန်နေတာပဲ…..ဘေးပေါက်ကနေ ချောင်းတော့မှဖင်လေးကိုကောက်ပြီး ….မုတ်ပေးနေတဲ့ယောက္ခမကြီးကအဝတ်စားမချွတ်ထားပေမယ့်ကောက်ကြောင်းအလှတော်တော်ပေါ်နေပါပြီ၊ကို့မှာ၊တံထွေးတောင်မျိူမချနိုင်ဘူး……လီးကိုထုသလိုလုပ်ုပီးလဥကို စုတ်နေရင်းးမှာ မြင်လိုက်တယ်။ ယောက္ခထီးလီးက ဂေါ်လိ နှစ်လုံးနဲ့လီးအရွယ်အစားကသေးတဲ့အထဲပါတယ်။
ကျနော်ဟာတဝတ်လောက်တောင်မရှိပလား၊”လုပ်မယ်နင်ချွတ်တော့ ထမီကိုအရင်ချွတ်”ဆိုပြီးကုန်းခိုင်းပြီးအတင်းကိုထည့်တော့တာပဲ…..”အား…..အာ…ကို……အဆုံးထိသင်အောင်ထိုး..ထိုး”နဲ့စိတ်အရမ်းထန်နေတဲ့ယောက္ခမကြီးကိုမြင်တတော့ကျနော် ပါအတင်းဝင်လိုးချင်စိတ်ကိုမနည်းထိန်းထားရတယ်။မိန်းမဖစ်တဲ့သူက သူရဲ့နို့ကြီးကိုကိုင်စေချင်လို့ အကျိကိုလှန်တင်ပေးတာတောင် ဟိုကလူကစိတ်မဝင်စား…ဘော်လီနဲ့နို့သီးနဲ့လိုက်ဖက်လွန်းလို့ မခံစားတက်တဲ့လူကိုဆောင့်ကန်ချလိုက်ချင်တယ်။
အချိန်ကြာကြာတော့လုပ်နိုင်သား၄၅မိနစ်လောက်ကြာသွားတယ်။ ဖင်ကြီးကိုကော့ကော့ပေးရင်း ဖြူဝင်းဖွံထွားတဲ့ …. ယောက္ခမကြီးကို.လိုးချင်စိတ်တဖွားဖွား ကျနော်ဖြစ်နေမိတယ်ဗျာ။သူတို့လင်မယားလိုးခန်းကို အပြီးအထိ ကြည့်ပြီး မဝသေးတဲ့ပုံပေါ်နေခဲ့တဲ့ ယယောက္ခမကြီးရဲ့ လိင်စိတ်ထန်မူကိုသတိထားမိလာတယ်။ ကျနော်လဲချောင်းနေတဲ့နေရာမှာတင် ၃ကြောင်းလောက်ပြီးသွားတယ်။ နောက်နေ့တွေကစပြီးလိုးရဖို့ ဘယ်လိုဂွင်ဆင်ရမလဲဆိုတဲ့အတွေပဲခေါင်းထဲရောက်နေတယ်။
သူကဘယ်လိုယောကျာင်္းမျိုးကိုသဘောကျလဲလို့ ခြောက်လလောက်အချိန်ယူ အကဲခက်ရသလောက်တော့……. ဂေါ်လီ အတောင့်ထက် အလုံးလေးကိုပိုသဘောကျတယ်၊လီးကြီးတာတော့မကြိုက်တဲ့ မိန်းမကခက်ရှားရှား၊သူ့ယောကျားကိုလဲဂေါ်လီအလုံးလေးတွေ ထပ်ထည့်ပြီး ဖိုက်စီစီဆေးထိုးခိုင်းနေတဲ့အသံကြားဖူးတော့သိနေတာပေါ့။ ကျနော်မိန်းမက ကလေးမွေး ဘာညာနဲ့ဆိုတော့ငတ်နေတာ အတော်ကြာနေတော့.ယောက္ခမ ပဲမှန်းပြီးထုနေရတဲ့ဘဝပေါ့။
နောက်ပိုင်းယောက္ခမနဲ့အဆင်ပြေအောင်ညှိနေပေးရင်း အနားကပ်နိုင်ဖို့လုပ်ရတယ်။ သမီးလဲလိုးချင်၊အမေလဲလိုချင်းနေတဲ့ကျနော်ရဲ့စိတ်ကိုပဲအပြစ်တင်မိပါတယ်။အချိ်န်ရယ်ကြိုးစားမူကြောင့်အနေနီးခဲ့ရပါပြီ။ဒါပေမယ့်ဘယ်လိုလုပ်ရမှန်းမသိသေးဘူးဖြစ်နေတယ်။ပြသာနာဖြစ်ရင်အကြီးကြီးကို…….အလုပ်ကိစ္စနဲ့ရန်ကုန်ရောက်တုံးက လိုလိုမယ့်မယ် ဆော်ဖီးဆေး၊ကြာဆေး၊ကြီးဆေး ကောင်းတဲ့ဟာ ပန်းဆိုးတန်းကကုလားဆိုင်မှာ ဝယ်ထားလိုက်တယ်။
ဈေကလဲအတော်ကြီးတယ်၊သူပြောတာမဟုတ်ရင် ဆယ်ဆပြန်ပေးဆိုပြီးကတိလဲပေး၊ဆိုင်ကလဲဆိုင်ကြီးထွက်မပြေးလောက်ပါဘူးဆိုပြီး ဝယ်လိုက်တာပေါ့။ ဂေါ်လီလဲ သုံးလုံးလောက်ထပ်ထည့်ချင်လို့ မိန်းမကိုပြောပြီးထပ်ထည့်လိုက်တယ်။အဓိကတော့ ယောက္ခမ အကြိုက်ဖစ်စေချင်လို့….ပါ။ ကို့စိတ်ကိုထိန်းမကတော့ရင် ဘာဖစ်ဖစ်နေ သူကြိုက်အောင်လိုးပေးနိုင်ဖို့ လဲပါသည်ပေါ့။အိမ်ပြန်ရောက်တော့ဆေးစမ်းချင်တာနဲ့ကျောက်စမ်းဖို့ မိန်းမကိုပဲရွှေးလိုက်တယ်။
မိန်းမက လီးကိုကိုင်ကြည့်ရင်း”ပထမသုံးလုံးတောင် စက်ဆလူးခါနေတာ၊ခြောက်လုံးဆိုရင်တော့မတွေးရဲ့ဘူး” ဆိုပြီး ရီဖြဲဖြဲနဲ့လီးကို သူုပါးစပ်ဖျားတော့လို့ကျေနပ်နေတဲ့ပုံပေါ်တယ်။အော်သူ့ခဗျာလဲကိုက သူ့အမေဆီစိတ် ရောက်နေတော့ အကြာကြီးအငတ်ထားသလိုဖြစ်နေရှာတာကိုး…….. သူကိုစိတ်ကြေနပ်အောင်နဲ့ဆေးစမ်းဖို့ကိုစီစဉ်ထားပြီးသား…..ကျနော်လီးကိုအငန်းမရစုတ်ပေးလိုက်ရှာနဲ့ရက်လိုက်.မိန်းမတာဝန်ကျေသလို၊ကိုကလဲငတ်နေတာနဲ့ဆေးအရှိန်နဲ့ပေါင်းပြီးအသားကုန်လိုးလိုက်တာ။
ဘေးဘီတောင်သတိမထားမိဘူး တစ်နာရီငျော်လောက်ကြာတော့ မိန်းမကဒန့်ဒန့်…..နဲ့တစပ်စပ်ဖြစ်ပြီး သူ့ အရေတွေလား၊သေးလာမသိအောင်ကိုရွဲစိုပြီး ကိုယ့်မှာတော့ ဆေးတန်ခိုးနဲ့မပြီးနိုင်မစီးနိုင်မြွေဟောက်ပါးပျင်းလိုထောင်နေတုံး…ကောင်းလိုက်တဲ့ဆေး။ ယောက္ခမကိုဆေးအားကိုးနဲ့ဂွင်ဖန်ဖို့အကြောင်းဖြစ်လာခဲ့တယ်……..မိန်းမမိသားစုလိုက်နဲ့ဘုရားဖူးသွားတဲ့အချိန်…..ပုဂံ၊တောက်လျောက်ကစပြီး အခွင့်ရေးစောင့်နေရတာမရခဲ့ဖူး..တောင်ကြီးမြို့ရောက်တော့ဟော်တယ်မှာစုနေတော့မှ………။
ကျနော်ကတလမ်းလုံးကားမောင်းရတော့တဆောင်တိုင်ပွဲ မလိုက်ပဲအခန်းမှာ ကျန်ခဲ့မယ်ပေါ့။သူတို့အဖွဲ့ရေချိုးအဝတ်စားလဲနဲ့ ဆူညံနေ လို့အခန်းပြင်ထွက်နေတာပေါ့။ သူတို့ အစီစီထွက်လာမှအခန်းထဲဝင်ပြီးအကျီချွတ်ရေချိုးခန်းထဲတန်းဝင်လိုက်တော့ ယောက္ခမ ကြီးတယောက်ထဲ အကျီ ဇိတပ်မရလို့တိုင်ပတ်နေပုံရတယ် ကျနော်ကိုမြင်တော့…..”သား.ရေ…အန်တီကို အကျီဇိလေးဆွဲပေးပါလား ဆိုတော့ကိုယ့်ကအကြိုက်ပေါ့၊ အန်တီရဲ့နောက်ကျောရောက်ရော ရုပ်ပျက်နေတာက လီး မာထောင်နေတာပဲ။
စကပ်ဆွဲသားနဲ့တင်းနတေဲ့တင်ပါးလေးအောက်ကဘစ် ရာလေးကိုလီးနဲ့မထိတထိထောက်ရင်းအချိန်ရသမျှစွဲပြီး လုပ်ပေးရတာပေါ့လေ၊အန်တီထွက်သွားတာကြည့်ရင်းကို့ ……လီးပါကိုင်နေလိုက်မိတယ်။ ရေချိုးနေရင်း နှစ်ချီလောက်ထုလိုက်ရတယ်ဗျာ။… ကျနော်လှဲနေရင်း ၁နာရီကျော်လာက်မှာ တခါးခေါက်သံကြောင့်နိုးသွားတယ်၊အန်တီကိုသူတူနှစ်ယောက်ကတွဲပြီးအိပ်ယာပေါ်တင်လိုက်တယ်၊လမ်းလျောက်ရင်းအကြောညက်သွားလိုတဲ့။
ကျနော်ပျော်သွားသည်၊အန်တီတူတွေကတန်ဆောင်တိုင်ပွဲပြန်သွားတော့မှ…ဆင်ကြံကြံနေသည်။ မိန်းမဖီးဆေးကိုသတိရမိတော့ ရေခဲသေတာထဲကအအေးတစ်ဘူးကိုအသာယူပြီး သေးသေးဖောက်ပြီး ဆေးပုလင်းရဲ့၃ပုံ၁မကထည့်လိုက်တယ်။ အန်တီအမောပြေသောက်ပြီးမှအိပ်ဆိုပြီးတိုက်လိုက်တယ်၊အန်တီကဟိုဖက်လှည့်စောင်း အိပ်တာကိုကြည့်ရင်း စိတ်တွေမထိန်းနိုင်တော့ပါ၊ ကျနော်လဲကြာဆေး၁လုံးသောက်လိုက်တယ်။
ဘာဖြစ်ဖြစ်ကွာလို့………..နာရီဝက်လောက်ကြာတော့အန်တီ လှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်လာတယ်…ဆေးရှိန်တော့တက်ပြီထင်တယ်ဆိုပြီး “အန်တီကျနော်နိုပ်ပေးရမလာ”အင်း….. “ရပါတယ်သားရယ်”တဲ့..အဲတော့ကိုပဲဇွတ်ရတာပေါ့။ အတင်းနိုပ်ပေးရင်း ခြေသလုံးလေးကိုဖြေးဖြေးလေးမထိတထိလုပ်တော့အန်တီရုပ်အတော်ပျက်နေတာသတိထားမိလာတယ်။ “အန်တီကိုသားပြောစရာရှိတယ်”..”သားဘာဖြစ်လို့အန်တီကိုအမေလို့မခေါ်တာလဲသိလား”…. “အမေတယောက်လိုစိတ်ထားလို့မရဘူး။
အန်တီကိုသား…….ပစ်မှားမိနေတယ်သားကိုခွင့်လွတ်ပါ ကျနော်စကားကြားတော့အန်တီတယောက်အံဩတဲ့မျက်နှာနဲ့ကြည့်ပြီး..တဖက်လှည့်သွားတယ်။ ကျနော်က”အန်တီကြိုက်သလိုသာအပြစ်ပေးပါတော့” ဆိုပြီးအတင်း ဖက်ပြီးစောက်ဖုတ်အသားကုန်စ နိူက် တော့တာပဲ။ “ခွေးသတောင်းစား၊မအေရောသမီးရောလိုးချင်နေတဲ့စောက်ကျင့်မကောင်းတဲ့ကောင်”တဲ့ကျနော် နောက်ဆုတ်လို့မရတော့ အတင်းအကျပ်လုပ်ရတာပေါ့။
လုံးနေရင်းအန်တီစောက်ဖုတ်ထဲလက်ရောက်သွားတော့အရည်တွေအများကြီးထွက်နေတယ်…မထူးပါဘူးဆိုပြီးကို့လီးကို အန်တီအထဲစွတ်ထည့်လိုက်တော့..”အမလေး……….သေပါပြီ”……..ဆဲနည်းမျိုးစုံဆဲပြီး…ရုံးကန်နေပြီး ခဏမှာငြိမ်သွားတယ်.၊”အာ…..အာာ”.လို့အသံတိုးတိုးထွက်နေပေမယ့်အလိုတူတဲ့ လက္ခဏာ ကြောင့် ကျနော်နည်းအတိုင်းရှယ်လိုးပေးပါတယ်။ ……… တဖြုန်းဖြုန်းအသံတွေဆက်တိုက်ထွက်ပြီးနောက်မှာအားလုံးညိမ်သက်နေပါတယ်။
ပြီးမှကြည့်လိုက်တော့ အဝတ်အစားဖရိုဖရဲနဲ့ေ ဘးတစောင်းအနေထားနဲ့ အန်တီ…..ကျနော်လဲထူပူပြီးရေချိုးခန်းထဲပြေးဝင်မိတယ်။ပြသာနာကိုဘယ်လိုရှင်းရမှန်းမသိရကြားထဲ..လီးကအရမ်းနာနေလို့ကြည့်လိုက်တော့ သွေးနည်းနည်းထွက်နေတယ်၊တဝက်လောက်ကချိုးထားသလိုခံစားရတယ်၊ပြန်တွေးကြည့်တော့မှအန်တီရဲ့အောက်ခံဘော်င်းဘီမချွတ်မိပဲဘေးတစောင်းဒီတိုင်းလုပ်ခဲ့တာပဲ။ထူပူနေတော့ကို့လီးတစ်ချောင်းလုံး အန်တီထဲပြည့်အောင်မဝင်တာ နောင်တရမိတယ်။
ရေချိုးပြီးထွက်လာတော့အန်တီကကုတင်ပေါ်မှာငုတ်တုပ်လေး….ကျနော်လဲဘာပြောရမှန်းကိုမသိတော့တာ….. အန်တီက.”ခုဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ၊သိကုန်ရင်မိုးမီးလောင်တော့မှာပဲ””မင်းပါးစပ်မဟနဲ့”ပုံမပျက်ကြားလား”။ ကိုကတော့”ဟုတ်ပေါ့”…ပြီးတော့…… “မင်းဂေါ်လီဘယ်နလုံးတောင်ထည့်ထားတာလဲ”… “အဲဒါကြောင့်ငါ့သမီးက မင်းကိုအသားကုန်ချစ်နေတာကိုး”ပြစမ်းနင့်ဟာ”…….ကျနော်လဲပြရတော့တာပေါ့ ရှက် ရှက်နဲ့……လီးကိုကိုင်ကြည့်ရင်းအန်တီက။
အမလေး..လေး..ကြီးရတဲ့အထဲဂေါ်လီက ခြောက်လုံးတောင်.ဟင်း….လို့သက်ပျင်းချရင်း “ခုမှမထူးဘူးထပ်လုပ်ချင်ရင်လုပ်”ကျနော်လဲအချိန်ဆွဲမနေပဲ..အန်တီနို့ကြီးကိုပွတ်ရင်းလည်ပင်းကြားကို အားရှိသလောက်စုတ်ပြီး .ကျနော်လက်ပပေါ်မှာမျော့နေတော့သည်။ အဲဒီကစလို့ခရီးသွားရင်းလစ်သလို..လိုးပြီးအန်တီကလဲ လစ်သလို ကျနော်လီးကို မုတ်ပေးပါတယ်။အိမ်ပြန်ရောက်တတော့လဲအခါခါ လိုးပါတယ်၊အန်တီကသူ့ယောကျာင်္းနဲ့ခပ်ကျဲကျဲလိုးပြီး..ကျွနော်ကိုတတော့သူသမီးနဲ့ အိပ်ရင် တောင်သဝန်အရမ်းတိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့ ခုချိ်န်ထိ.ဘယ်သူမှမရိပ်မိသလို…နှစ်အနည်းငယ်အတွင်း တစ်ရက်မပျက်နေ့တိုင်း မက်မက်မောမော မုတ်ပေးလျှက်ပါ ….. ပြီးပါပြီ။